Xubno ka mid ahaa Al Shabaab oo lagu dilay Bariire – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xubno ka mid ahaa Al Shabaab oo lagu dilay Bariire
Post author By MM
Post date 14th May 2019
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegtay in Al-Shabaab ay xalay isku dayeen inay weeraraan Deegaanka Bariire ee Gobolka Sh/Hoose iyaga oo labo jiho ka soo weeraray,hayeeshee la fashiliyay.
General Odawaa Yuusuf Raage Taliyaha Ciidanka lugta ayaa Warbaahinta Dowladda u sheegay in u 14 kamid Xubnihii Shabaab ee weeraray deegaanka Bariire ay halkaasi ku dileen,hayeeshee majiraan warar madax banaan oo xaqiijinaya waka kasoo baxay General Odawaa.
Deegaanka Bariire ayaa dhawaan waxaa Al Shabaab kala wareegay Ciidanka Xoogga dalka gaar ahaan kuwa Danab kuwaas oo halkaas ka sameeyey howlgalo isdaba joog ah,waxaana sidoo kale ay la kulmayeen weeraro kaga imaanayay dhanka Al-Shabaab.
Abdi Aziz Hassan Ibrahim is , a somali veteran journalist based in the Somali capital, Mogadishu. Twitter @mareegonline
← Somali residents renovate homes damaged by Al Shabaab → Qarax Khasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Muqdisho